Gumiguru 17, 2018 arun
CME: Avhareji daily vhoriyamu nokuda Bitcoin ramangwana kwakawedzera 41% mu Q3
Avhareji daily Mavhoriyamu nokuda Bitcoin ramangwana zvokutengeserana akaona chinokosha kusvetuka mu Q3 zvichienzaniswa okupedzisira nguva, maererano CME Group. Avhareji daily vhorumu corners 5,053 zvibvumirano Q3, vakakwira 41% kubva 3,577 zvibvumirano Q2. The mufananidzo zvakare chinoratidza 170% kuwedzera kubva pakutanga kota wacho 1,854 zvibvumirano.
CME akapawo mashoko pamusoro yakazaruka mubereko, inomiririra uwandu zvibvumirano kugadzikana dzaidzidziswa avo vanotengesa pamusika. Nhamba iyi yakawedzera kubva 1,523 zvibvumirano zviri Q1 kuti 2,873 zvibvumirano Q3, rinomirira kukura kubva Q2 raMwari 2,405. wo, Tim McCourt, CME kuti yamaneja uye musoro pasi pose zvakarurama zvinhu uye dzimwe upfumi vakati “Kubva 40% pamusoro Bitcoin neramangwana zvokutengeserana musi CME zviri kunze US, 21% vari kuuya vachibva Asia.”
In Q3, Bitcoin neramangwana avhareji vhoriyamu daily akasimuka 41% uye rakavhurika kufarira chakanga 19% pamusoro Q2 . Dzidza kuti musika vechikamu vari kushandisa BTC kushandisa mikana kuchinja misika. https://t.co/Yt41SzsHku pic.twitter.com/Kw4OX0QaKT
— CMEGroup (@CMEGroup) Gumiguru 17, 2018
BitMEX anotangazve-software yeGmail.END_STRONG kukwikwidzana Bitcoin Core
Zvokutsvakurudza ruoko cryptocurrency zvokutengeserana pechikuva BitMEX akazivisa kuti zvichaita vomurova yayo Bitcoin Software yeGmail.END_STRONG kukwikwidzana bhuku Implementation uye maindasitiri mureza Bitcoin Core. Chakashama tichitarisa svondo rino yakareba mumhanyi vachikurukura zvemashoko yemakwikwi Software vatengi, BitMEX Research akati akasarudza kusunungura yayo BTC yeGmail.END_STRONG kubatsira kugadzirisa kusanzwisisa kuti rakazaruka-tsime Software dzigare mairi Bitcoin Core ari mutariri cryptocurrency kukura uye "ane rakasiyana kugona kuchinja kana kudzivirira shanduko kuna Bitcoin kuti tenderano mitemo."
BitMEX Research Anoti, ndiwo vanozvishandisa ndiani ndivo zvechokwadi mutariri cryptocurrency wacho dzakati mitemo. Neboka yeGmail.END_STRONG idzva, ainzi Bitcoin BitMEX Research, ndehwokuti kuderedza nemambure kuti kuvimba chete chikuru-software dzigare mairi pasina kudzidzisa pangozi zvitsva mararamiro. "Sezvo-software chibayiso chenyama china Bitcoin Core, izvozvo anotakura hapana ngozi kwete kuva tsikidzi kuti tsikidzi enderana, kufanana Satoshi ainetseka,"Vanyori akanyora. "The BitMEX Research yeGmail.END_STRONG uyewo haachinji Bitcoin kuti tenderano mitemo, saka zvinonetsa pamusoro gakava chainsplits regai kushandisa. saka, kana Bitcoin Core dzigare mairi chinozadzwa dzikapiswa kana dzadzimwa, ari codebase vanogona kuvandudza kushandisa Bitcoin BitMEX Research dzigare mairi. "
CFTC mukuru anoyambira akangwara chibvumirano vagadziri pamusoro chokufenbera remitemo
Smart chibvumirano coders yaizoitwa mhosva kana ivo vachiziva kushandisa blockchain Michina kuumba mabasa kuti vakafunga sezvo chokufenbera “chiitiko zvibvumirano,” maererano US regulator. Brian Quintenz, mumwe mumiririri panguva US chinokosha uye hwamangwana Trading Commission, akatsanangura kuti blockchain protocols achibvumira “vanhu kusika vakachenjera zvibvumirano zvavo vachifanotaura zvichaitika zvikuru broadly… Zvikurukuru, zvibvumirano izvi aizorega vanhu kuti bheji pamusoro zvaitika zvichaitika, akafanana dzemitambo kana sarudzo, kushandisa digitaalinen mari. Kana wako achifanotaura zvakanaka, chibvumirano rwoga mubayiro penyu winnings,” akati.
Quintenz akapfuurira kuwedzera kuti tsvagai zvakaitika kutyorwa, achitenda kuti akangwara chibvumirano coders munovaka functionality kwakadaro pamusoro imwe blockchain samambure Tingangonyanya mhosva uye kuti kusungirwa. “Ndinofunga mubvunzo rakakodzera kana izvi bumbiro Developers aigona kufunga kufanoona, panguva akasika bumbiro, kuti yaizovawo kushandiswa US vanhu nenzira violative ose CFTC mirayiro,” akati. zvokufungidzira, akati, bumbiro remitemo aizofanira kuva “akanyorerwa vakwanise chairo mhando yebasa nokudzorwa CFTC, uye hapana nesimba yakaitwa kuti runosanganisirawo kusashandisa ichiwanikwa kuna US vanhu.”
piyona Apple Steve Wozniak akaita mushandirapamwe akatanga blockchain inivhesitimendi yakasimba
Steve Wozniak, ari Tech entrepreneur zvakanakisisa kuzivikanwa sezvo co-akatanga Apple, zvasungwa EQUI Global, asingashumbi hake guru mari akavaka kushandisa blockchain Michina, somunhu co-muvambi. Wozniak akati kuti achaita nomurindi kunosora kuti zvigadzirwa Makambani kuwana "Tech nyeredzi" nezveramangwana. Akatiwo iye anogamuchira itsva pitches kugara; zvisinei, ndiyo nguva yokutanga, pashure Apple, kuti iye akabvuma kuti abatane kambani.
The "akazaruka-dzakaguma" EQUI Fund ichanyanya pamusoro asiri zvechechi vanoita uye Tech Makambani, pamwe chete 20% waizoitwa vasiri Tech makambani akadai zvivako uye inivhesitimendi Collectibles. Wozniak akati anotenda yemakambani akafanana EQUI achaita kukanganisa VC indasitiri uye kubvumira vamwe Makambani kutevera muenzaniso itsva kwakavakirwa blockchain Michina.
Kraken Daily Market Mushumo 16.10.2018
$112M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Bank of America’s Cryptocurrency Patent! Haven Protocol – Yanhasi Crypto News
TRON Acquires World’s LARGEST Decentralized Application – Yanhasi Crypto News
What’s Going On With Hashflare and Cloud Mining? – Yanhasi Crypto News